Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Fungal infections (3) မှိုအမျိုးမျိုး ဆေးအမျိုးမျိုး (၃)
Fungal infections (3) မှိုအမျိုးမျိုး ဆေးအမျိုးမျိုး (၃)
Fungal Infections = Mycotic infections မှိုရောဂါတွေကို အကြမ်းအားဖြင့် အပေါ်ယံနဲ့ အတွင်းပိုင်း ဖြစ်တာတွေလို့ ခွဲခြားထားတယ်။ ဆိုးဝါးတာရော ကုသရတာပါမတူကြဘူး။ Superficial Fungal Infections ကိုယ်ခန္ခာ အပေါ်ယံမှာ ဖြစ်တာတွေကို ဦးစားပေး ရေးပါမယ်။ ဦးရေခွံကနေ ခြေမအထိဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါပါ။
1. Tinea corporis ကိုယ်ခန္ခာ-မှို (ပွေး)၊
2. Tinea Cruris (Jock Itch) ဂျွတ်
3. Tinea unguium (Onychomycosis, Dermatophytic onychomycosis, Ringworm of the nail) ခြေသည်း-လက်သည်း မှို၊
4. Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) ညှင်း
Principles of Treatment မှို-ပွေးရောဂါတွေကို ကုသတဲ့အခါ
• အခြေခံအားဖြင့် ဘယ်မှိုပိုးလဲဆိုတာ ဆေးစစ်နည်းတွေနဲ့ သေခြာအောင်လုပ်မှ ကောင်းတယ်။ ထင်တဲ့ဆေး သုံးနေရင်း မပျောက်နိုင်လို့ ဆေးစစ်တော့ ပိုခက်စေနိုင်တယ်။
• မှိုရောဂါ အများစုကို လိမ်းဆေးနဲ့ရတယ်။ လက်သည်း-ခြေသည်းမှာဖြစ်ရင်တော့ လိမ်းဆေးနဲ့တင် မရဘူး။
• အရေပြားမှာ ဖြစ်တာတွေအတွက် Griseofulvin ဆေးက အများဆုံးသုံးပြီး စိတ်ချရတယ်။ ဦးရေခွံနဲ့ လက်သည်း-ခြေသည်းတော့ ဒီဆေးနဲ့မရဘူး။
• Itraconazole နဲ့ Terbinafine ဆေးတွေက Dermatophytes အတွက် ပိုကောင်းတယ်။ Griseofulvin ပေးတာထက် ရက်တိုတယ်။
• Fluconazole ဆေးကတော့ Yeasts ဖြစ်တာအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ဥပမာ Mucocutaneous candidiasis အရေပြားနုလေးတွေမှာဖြစ်တာမျိုး။
• Itraconazole, Fluconazole နဲ့ Terbinafine ဆေးတွေက အသဲကောင်းနေသူတွေအတွက်သာ သုံးသင့်တယ်။ Dermatophytosis အတွက်တော့နိုင်တယ်။
• Ketoconazole ဆေးကို Dermatophytosis အတွက် တလကျော်ပေးရင် အသဲကိုထိခိုက်စေလို့ အခု မသုံးကြတော့ဘူး။ Tinea versicolor ဖြစ်တာအတွက်တော့ ကောင်းတယ်။
1) Tinea Corporis or Tinea Circinata (Body Ringworm) ကိုယ်ခန္ခာ-မှို (ပွေး)၊
• Miconazole, Clotrimazole, Butenafine နဲ့ Terbinafine လိမ်းဆေးတွေ ပေးရတယ်။
• Terbinafine နဲ့ Butenafine ဆိုရင် ရက်တိုတိုနဲ့ရတယ်။
• မျက်မြင်မှာ ကင်းစင်နေပေမဲ့ နောက်ထပ် ၁-၂ ပါတ်အထိ ဆေးပေးရတယ်။
• Betamethasone Dipropionate with Clotrimazole (Lotrisone) ဆေးမသုံးရဘူး။
• စားဆေးအဖြစ် Griseofulvin (ultramicrosize) 250–500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၄-၆ ပါတ်။
• Itraconazole 200 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၇ ရက်။
• Terbinafine 250 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁ လ။
2) Tinea Cruris (Jock Itch) ဂျွတ်
• ပေါင်ခြံနဲ့ တင်ပါးနေရာတွေမှာဖြစ်တယ်။ လက်သည်းမှိုနဲ့ပါတွဲနေတတ်တယ်။ အတော်ယားတယ်။
• Miconazole nitrate (Zeasorb-AF) powder ဆေးမှုံ့သုံးပါ။ အတွင်းခံချောင်တာဝတ်ပါ။
• Terbinafine cream ကို တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၇ ရက် လိမ်းရင် လူနာ ၈ဝ% ကျော်ပျောက်တယ်။
• Griseofulvin ultramicrosize 250–500 mg စားဆေး တရက် ၂ ကြိမ်၊ ၁-၂ ပါတ်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Itraconazole 200 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၇ ရက်။ ဒါမှမဟုတ်
• Terbinafine 250 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၇ ရက်။
3) Tinea Manuum & Tinea Pedis (Dermatophytosis, Tinea of Palms & Soles) ကို Athlete's Foot အားကစားသမား ခြေထောက်လို့ အခေါ်များတယ်။ ခြေချောင်းတွေကြားမှာဖြစ်တယ်။ ယားမယ်၊ စပ်ပူစပ်လောင် နေမယ်။
• ဖြစ်စမှာ -
- Aluminum subacetate solution ဆေးရည်ထဲမှာ မိနစ် ၂ဝ ကြာ၊ တနေ့ ၂ ခါ စိမ်ထားပါ။
- Imidazoles or Ciclopirox (ခရင်မ်)-ဆေးရည် တနေ့ ၁ ခါ၊ တပါတ်ကြာ သုံးရင် ဗက်တီးရီးယား ဝင်နေတာတွေ ကောင်းသွားမယ်။
- အဲဒါနဲ့မရသေးရင် Terbinafine or Butenafine ကို တနေ့ ၁ ခါ၊ တပါတ်ကြာလိမ်းပါ။
• နောက်ပိုင်းမှာ -
- Griseofulvin 250–500 mg စားဆေး တရက် ၂ ကြိမ်၊ ၁-၂ ပါတ်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
- Itraconazole 200 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၂ ပါတ်၊ ဒါမှမဟုတ် Itraconazole 400 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁ ပါတ်၊ ဒါမှမဟုတ်
- Terbinafine 250 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၂-၄ ပါတ်၊
4) Tinea Versicolor (Pityriasis Versicolor) ညှင်း
• ကူးစက်ရောဂါ မဟုတ်ပါ။
• Selenium sulfide lotion ဆေးလိမ်းပါ။ လည်ပင်းကနေ ခါးအထိ တနေ့ ၁ ခါ၊ ဆေးကို ၅-၁၅ မိနစ်ကြာထားပါ။ တလမှာ ၇ ရက်လိမ်းပါ။
• Ketoconazole shampo- 1% or 2% တခါလိမ်း ၅ မိနစ်၊ တလမှာ ၇ ရက်။
• Ketoconazole 200 mg တနေ့ ၁ ခါ၊ ၇ ရက် သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Ketoconazole 400 mg တကြိမ်ထဲသောက်ပါ။ ဆေးသောက်ပြီးရင် ၈-၁၂ နာရီအတွင်း ရေမချိုးပါနဲ့။ ပူအိုက်တဲ့နေရာဒေသတွေမှာ တခါထဲသောက်ဆေး မတိုးတတ်ပါ။ များရင်လဲ အသဲထိုခိုက်မှာစိုးရတယ်။ fluconazole 300 mg ကို တခါသောက်ပြီး နောက် ၁၄ ရက်မှာ တခါထပ်သောက်ပါ။
• Imidazole creams, solutions, and lotions လိမ်းဆေးတွေက နေရာကွက်ဖြစ်တာအတွက်ရတယ်။
မှိုရောဂါမဖြစ်အောင်၊ ပျောက်ပြီးနောက်မပေါ်အောင် စိုထိုင်းနေတဲ့ အရေပြားမျိုးဟာ မှိုတွေကို ဖိတ်ခေါ်နေတာကို သတိပြု ဆင်ခြင်ပါ။ ရေချိုး-ဆေးကြောပြီးရင် ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ။ ကိုယ်လိမ်းပေါင်ဒါ သုံးနိုင်တယ်။ တခြားရောဂါအတွက် Corticosteroids (စတီရွိုက်) ဆေးလိမ်းနေရရင် Candidal infection ထပ်ဝင်လာလို့ Antifungals မှိုဆေးပါ တွဲလိမ်းရတတ်တယ်။
Antibiotics ပဋ္ဋိဇီဝဆေး၊ corticosteroids (စတီရွိုက်) ဆေး၊ immunosuppressant drugs ခုခံအားကျအတွက်ဆေး နဲ့ contraceptives ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေသုံးနေရသူတွေမှာ မှိုရောဂါကို ပိုဆိုးစေနိုင်တယ်။ Endocrine disorders ဟော်မုန်းရောဂါ၊ Immune diseases ရောဂါပြီးစနစ်ရောဂါ၊ Obesity လူဝလွန်းတာ၊ AIDS ရောဂါ၊ Tuberculosis တီဘီ၊ Burns ကြီးမားတဲ့ မီးလောက်နာ၊ Leukemia (လူကီးမီးယား)၊ Diabetes mellitus ဆီးချိုရောဂါ ရှိနေသူတွေမှာလဲ မှိုရောဂါ ဆိုးစေနိုင်သေးတယ်။ Antibiotics ပဋ္ဋိဇီဝဆေးကြောင့်လဲ မှိုရောဂါရလာနိုင်တယ်။
Diagnosis မှိုရောဂါ ဟုတ်-မဟုတ်စစ်ရာမှာ KOH (Potassium hydroxide) နည်းသုံးတယ်။ နောက်ပြီး Wood's ultraviolet lamp မီးနဲ့ကြည်ရင်လဲ သိတယ်။ လိုအပ်ရင် Culture and sensitivity test လုပ်ရတယ်။